Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Tourism » Hawaii Ezumike ezumike: Kacha Mma, Ma Ọ Dịbeghị
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Mgbazinye ezumike Hawaii kọrọ na mmụba zuru oke na ntinye, ọchịchọ, ọnụnọ na nkezi ọnụego kwa ụbọchị ma e jiri ya tụnyere 2020, mana ọ kwụsịrị n'azụ oke ọrịa zuru oke nke akọpụtara maka ọkara mbụ nke 2019.
N'ọnwa June 2021, ngụkọta ọnwa nke mgbazinye ezumike steeti niile bụ abalị otu nkeji 591,100.
June 2021 chọrọ kwa ọnwa bụ 472,100 ehihie na abalị.
Onwa June 2021 nkezi ọnụnọ nke otu ọnwa bụ pasent 79.9.
Mgbazinye ezumike Hawaii na steeti niile kwuru na mmụba dị ukwuu na ọkọnọ, ọchịchọ, ọnụnọ na nkezi ọnụego kwa ụbọchị (ADR) na June 2021 ma e jiri ya tụnyere June 2020. Agbanyeghị, ma e jiri ya tụnyere June 2019, mgbazinye ezumike, ọchịchọ na ADR gbadara ebe obibi ebili ntakịrị. ka mbelata ọkwa ọkwa.
N'otu aka ahụ, site na ọkara mbụ nke 2021, mgbazinye ezumike Hawaii kọrọ mmụba n'ozuzu ya n'otu ụdị arụmọrụ ma e jiri ya tụnyere 2020, mana ọ kwụsịrị n'azụ oke ọrịa zuru oke nke akọpụtara maka ọkara mbụ nke 2019.
Ihe HaaỤlọ Ọrụ Njem Nleta Waii (HTA) wepụtara akụkọ akụkọ ezumike ezumike ezumike Hawaii maka ọnwa June na ọkara mbụ nke 2021 na -eji data Transparent Intelligence, Inc.
N'ọnwa June 2021, ngụkọta ọnwa nke mgbazinye ezumike steeti niile bụ 591,100 nkeji abalị (+74.1% vs. 2020, -32.9% vs. 2019) na ihe kwa ọnwa bụ 472,100 nkeji abalị (+910.6% vs. 2020, -27.1% vs . 2019). Nke a rụpụtara na nkezi n'ọnụọgụgụ nke ndị nwe ụlọ kwa ọnwa nke pasent 79.9 (+66.1 pasent vs. 2020, +6.3 pasent isi vs. 2019) maka June, nke dịtụ elu karịa ọnụnọ ụlọ oriri na nkwari akụ Hawaii (pasent 77.0).
ADR maka ụlọ mgbazinye ezumike na steeti niile mụbara na June ruo $ 242 afọ-afọ (+17.0% vs. 2020, -29.9% vs. 2019), mana ọ ka dị obere karịa ADR nke $ 346 na June 2019. Site na ntụnyere ADR maka ụlọ oriri na ọ wasụ wasụ bụ $ 320 na June 2021. Ọ dị mkpa iburu n'uche na n'adịghị ka ụlọ oriri na nkwari akụ, nkeji na mgbazinye ezumike, ụlọ ezumike oge na ụlọ nkwari akụ adịchaghị adị kwa afọ ma ọ bụ ụbọchị ọ bụla n'ọnwa ma na-anabatakarị ndị ọbịa karịa. ụlọ nkwari akụ ọdịnala.
N'ọnwa June, enyere ohere ịgbazinye nwa oge iwu ka ọ rụọ ọrụ na Maui County na Oahu, Hawaii Island na Kauai ma ọ bụrụhaala na ejighị ha dị ka ebe iche.
Iwu iche iche nke Hawaii maka ndị njem n'ihi ọrịa na -efe efe malitere na Machị 26, 2020, nke butere nnukwu ọrụ na njem nlegharị anya nke steeti ozugbo. N'ime June 2021, ọtụtụ ndị njem na-esite na steeti na-eme njem ma na-ejegharị ejegharị na-eme njem nwere ike ịgafe mgbochi ụbọchị iri nke steeti nwere ezigbo ule COVID-10 NAAT sitere na onye otu nnwale tụkwasịrị obi tupu ọpụpụ ha na Hawaii. site na mmemme Njem Nchekwa. Na mgbakwunye, ndị mmadụ gbara ọgwụ mgbochi ọ bụla na Hawaii nwere ike ịgabiga iwu ịpụ iche na-amalite na June 19, 15. Ewepụkwara mmachi ime njem n'etiti mpaghara yana June 2021, 15.
Data dị na HTA's Hawaii Vacation Rental Performance Report na -ewepu nkeji nke akọpụtara na Akụkọ Nrụpụta Họtel Hawaii ya na Hawaii Timeshare Quarterly Survey Report. A kọwapụtara mgbazinye ezumike dị ka iji ụlọ mgbazinye, otu ọnụ ụlọ, ọnụ ụlọ nkeonwe n'ime ụlọ nkeonwe, ma ọ bụ ọnụ ụlọ/oghere n'ime ụlọ nkeonwe. Akukọ a anaghị ekpebi ma ọ bụ dị iche n'etiti nkeji enyere ikike ma ọ bụ enweghị ikike. A na -ekpebi iwu nke ụlọ mgbazinye oge ezumike ọ bụla dabere na mpaghara.